Kozio ahy : « Aza manao toy ny ranon’Ikopa tonga namana vao mavomavo » - Studio Sifaka - Actu, musique, conseils et débats pour les jeunes à Madagascar
Le fleuve Ikopa sert de référent dans cette expression malgache.
Kozio ahy : « Aza manao toy ny ranon’Ikopa tonga namana vao mavomavo »
Madagascar est riche en expressions et en proverbes. Nos ancêtres se sont inspirés de faits réels afin de nous transmettre leur sagesse, leurs constats, leurs avertissements à travers des mots, plus particulièrement des métaphores. « Aza manao toy ny ranon’Ikopa tonga namana vao mavomavo », on écoute les explications de Jean Maurice Rasamoelina, orateur, dans Kozio ahy.
Manan-karena fomba fiteny, oha-pitenenana, ohabolana ny malagasy ary mifono hevi-dalina avokoa izy ireny, mety ho anatra, fampitandremana, fandraràna…. « Aza manao toy ny ranon’Ikopa tonga namana vao mavomavo », izay indray no itondran’i Jean Maurice Rasamoelina, mpikabary, fanazavana ato anaty kozio ahy.
Studio Sifaka · 2020 - 09 - 10 Fandaharana -KOZIO AHY - RANON'IKOPA